Vicka nke Medjugorje: ozi gbasara nne anyi di aso maka ndi na eto eto | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ya mere, VICKA gwara ndị na-eto eto na ụtụtụ Tọzdee August 2:
Achọrọ m ịgwa gị nnukwu ozi nke Nwanyị nwanyị anyị na-enye anyị niile: ha dị mfe: ekpere, ngbanwe, ibu ọnụ, udo. Nwaanyị a chọrọ ka anyị jiri obi anyị nabata mee ya. Mgbe Nwaanyị anyị rịọrọ maka ekpere, ọ na-ekwu na a na -eme ya site na obi, ọ bụghị na ọnụ ya na ọ na-abụ ọ joyụ.
2. N’oge na-adịbeghị anya, o gosipụtawo nchegbu maka ndị na-eto eto n’ụwa niile n’ihi na ha nọ n’ọnọdụ jọgburu onwe ya, anyị nwere ike iji ekpere si n’obi na ịhụnanya nyere ha aka. Nwaanyị anyị na-ekwu, sị: “Ihe ụwa na-enye gị agabiga, ma Setan na-eji ihe niile oge niile pụọ.
3 ° Nwanyi anyi n’emere anyi ihunanya ya, udo ya n’ihi na anyi wetara ya onye obula anyi huru ma gozie anyi.
4 ° Meri kwuputara ochicho nke ka emegharia ekpere na ezi na ulo, ka ndi nile, ma ndi okenye ma ndi okenye tokọọ onu ma kpee kari na Setan aghaghi inwe ike.
5 ° Ọ chọrọ ka anyị tinye Oriri Nsọ na etiti ndụ nke mmụọ anyị n'ihi na ọ bụ oge kachasị nsọ nke Jizọs bịakwutere anyị.
Nke 6 Maka nke a Nwanyị nwanyị anyị na-arịọ maka nkwupụta kwa ọnwa, mana ọ bụghị dịka ọrụ, mana dịka mkpa yana anyị ga-arịọ onye ụkọchukwu maka ndụmọdụ otu anyị nwere ike isi gaa ma gbanwee ndụ anyị. Nkwupụta a ga - agbanwe anyị ma wetara anyị Chineke.
Nke asaa N’ụbọchị ndị a Nwanyi nwanyị agwala anyị ka anyị jiri ekpere anyị mee ka ọ dị ike: ọ chọrọ ha maka mmemme nke Chineke n’arụ ebe a; n'ihi nke a kwa anyị na-ahapụ ihe ụtọ. Anyị na-enye Jizọs ihe si n’aka ya.
8th Ọ na-atụ aro ka ụbọchị ọ bụla anyị gụọ Akwụkwọ Nsọ ma bie ya ụbọchị.
9 ° N’uhuruchi a mgbe m zutere Nwanyị anyị, aga m ekpe ekpere maka unu niile. Meghee obi gi inata amara a. O biara n’enweghi oku. Naanị chọrọ ya "